မင်းရဲ့ iPhone မှာပြနာတွေရှိလား။ Restore လုပ်နိုင်ပါတယ် | အိုင်ဖုန်းသတင်း
မင်းရဲ့ iPhone မှာပြနာတွေရှိလား။ Restore လုပ်နိုင်ပါတယ်
တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် iOS မွမ်းမံမှုများရောက်လာပြီးဆိုလိုသည်မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် (သို့) လများအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏စက်ကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယခင်ထုတ်ကုန်များထက် ပို၍ သိသာသော်လည်းအသစ်များမှာပြproblemsနာမရှိချေ။ ဒီထက်အများကြီးကြာရှည်ခံသောဘက်ထရီ၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များပိတ်ခြင်း၊ သူတို့မလုပ်သင့်သောအခြားသူများ၊ စနစ်နှေးနှေးပြန်ဖွင့်ခြင်း၊ကျပန်းပေါ်ပေါက်ပြီး၊ တရားဝင်မွမ်းမံချက်များအပြီးတွင်မပြပါ
တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဆောင်းပါး၏မှတ်ချက်များသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှားများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏မေးခွန်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်တွစ်တာတွင်သင်သည်သင်၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းသည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ Telegram လိုင်းတွင်သင်၏ iPhone ကိုသင့်လျော်သလိုအလုပ်လုပ်ရန်သဲလွန်စရှာသည်။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းနည်းကမင်းရဲ့ iPhone ကို restore လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သင်ဘာကြောင့်သင်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါသည်။
1 အပ်ဒိတ်လုပ်ပြန်လုပ်လား။ ခြားနားချက်များ
2 Backup ကကောင်းတဲ့ option မဟုတ်ဘူး
Apple သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်က OTA မှတစ်ဆင့် update များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်s ကဆိုလိုသည်မှာသုံးစွဲသူများသည် iTunes နှင့်မွမ်းမံရန် iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုလက်တွေ့မေ့သွားသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်အလွန်လျင်မြန်ပြီးအဆင်ပြေလွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ၏ချိန်ညှိချက်များထဲသို့ ၀ င်ပြီး Update ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ရွေးချယ်သင့်သည်။ အရာအားလုံးသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာအလုပ်လုပ်သင့်သည်။ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုသည်မှာစနစ်ဟောင်းကိုစနစ်သစ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စုဆောင်းထားသည့်အမှိုက်များနှင့်အတူကျန်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သင့် iPhone ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းအပြီးတွင်အရာရာတိုင်းသည်ယခင်ကဲ့သို့ပင်တူညီသော်လည်းဗားရှင်းအသစ်၏သတင်းများနှင့်လည်းမငြင်းနိုင်ပါ။ အချိန်အများစုကကောင်းကောင်းသွားသင့်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါမညွှန်ကြားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတော့မဟုတ်ဘူး။။ သို့သော် အကယ်၍ ပြhaveနာများရှိပါကသင့် iPhone သည်အလုပ်လုပ်သင့်သည့်အတိုင်းအလုပ်မလုပ်ပါကဘက်ထရီသည်ယခင်ကဲ့သို့ထက်ဝက်မျှမကြာပါကအခြားရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ရောက်ပြီ။
သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကို Lightning cable ကိုအသုံးပြုပြီး iTunes နှင့် ဆက်သွယ်၍ Restore ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်အတူခြားနားချက်ကဘာလဲ? ကောင်းပြီဘာလဲ ဖုန်းကိုဖျက်လိုက်ပြီးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုခြစ်ရာကနေ install လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်လို့ပြီးရင် iPhone အသစ်ကိုရလိမ့်မယ်။, box ကိုထဲကလတ်ဆတ်လိုပဲဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူ။ ဤနည်းဖြင့်လျှောက်လွှာများ၊ စနစ်ဆက်တင်များစသည်တို့တွင်ကျန်ရှိသည့်မည်သည့်သဲလွန်စကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ကိရိယာတွင်ဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်စုဆောင်းထားသောအမှိုက်သရိုက်များကိုလည်းဖယ်ရှားခဲ့ပြီးသင်၏ပြproblemsနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကော။
Backup ကကောင်းတဲ့ option မဟုတ်ဘူး
များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်သန့်ရှင်းသောပြန်လည်အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုကြပြီးနောက်တွင်အရံသိမ်းဆည်းမှုများကိုပြန်ယူထားကြသဖြင့်အရာရာတိုင်းသည်ယခင်အခြေအနေအတိုင်းပြန်သွားသည်။ ၎င်းသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းထက်အားသာချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကော်ပီသည်သင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်ပြdragနာများကိုလည်းဆွဲထုတ်လိမ့်မည်။ သင့်တွင်အမှားအယွင်းများကိုမွမ်းမံခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်အရံသိမ်းဆည်းခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းရှိပါက၎င်းတို့အားသင်ဆက်လက်ထားရှိခြင်းသည်သာမန်ဖြစ်သည်။ backup တစ်ခုသည်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ပျောက်သွားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးသောအခါသတင်းအချက်အလက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှအသုံးချမည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ iPhone သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသင့် iPhone ပေါ်တွင်သင်၏ iPhone ရှိသင့်ဂီတ၊ ဓါတ်ပုံများနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူပြီးနောက်မှပြန်ထားရန်လိုသောကြောင့်၎င်းကိရိယာကိုပြန်ယူခြင်းသည်ငရဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့ iCloud နှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ သတိပေးချက်များကိုမိုးတိမ်တွင်သိမ်းဆည်းထားရုံသာမကသင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ Apple Music (သို့) Spotify သည်သင့်အားပြန်လည်ရယူပြီးနောက်သင်၏ဂီတကိုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ရယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ Cloud service မှသင်ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အချက်အလက်အနည်းငယ်သာကျန်ပါသေးသည်ဒါကြောင့်သင်လုပ်ရမယ့်တစ်ခုတည်းသောနှစ်ကိုမလုပ်ခင်သင့်မှာအရာအားလုံး (iCloud, Dropbox, Google Drive (သို့) သင်အသုံးပြုသည့်မည်သည့်စနစ်) ကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်မထားဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကိစ္စအများစုတွင်ဂိမ်းများပင် iCloud တွင်ဖြစ်စေ၊ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုမှသော်လည်းကောင်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်မှုစနစ်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသင်ကခြစ်ရာကနေစတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ iOS 11 နှင့် watchOS 11 ဆိုက်ရောက်လာသောအခါသင်၏ Apple Watch ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအချက်အလက်များကိုတောင် iCloud တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်သည်ဒါကြောင့်အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး WhatsApp တွင်ကိုယ်ပိုင် iCloud backup လည်းရှိသည်။ အရာအားလုံးစနစ်တကျပြုပြင်ထားလျှင်ဘာမှမဆုံးရှုံးဘဲမနေနိုင်တော့ဘဲ၎င်းကိုသာစစ်ဆေးရမည်။
Device ကိုပြန်လည်ထည့်ပြီးတာနဲ့သင်လုပ်ရမယ့်တစ်ခုတည်းသောအရာကသင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ပြီးအရာအားလုံးကိုပြproblemsနာမရှိဘဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အချိန်ကို WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး data ပြန်လည်ထူထောင်ရန်စိတ်ရှည်စွာစောင့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, applications များထပ်မံဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ backup ကိုအသုံးမပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့် application ကို download လုပ်မည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဖက်တွင်ကြီးမားသောပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ ဘယ်နှစ်ယောက် application ကို install လုပ်ပြီးပြီလဲ။ Device ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး application တွေပြီးတာနဲ့သင်မှာနေရာလွတ်များများရှိသည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်၊
အပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်သင် App Store တွင်၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည်ကိုတစ်ယောက်ချင်းစီမသွားရန်လိုအပ်သည်။ iPhone ထဲ၌ ၀ ယ်ထားသောသင်၏ application ကိုရယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်သောအရာများကိုနှိပ်ပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်က WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်နိုင်ရင် iPhone ကိုအားအပြည့်သွင်းပြီးဆက်သွယ်နိုင်မယ်။ iOS 11 စနစ်သစ်သည်သင့်အားတစ်ချိန်တည်းတွင် icon များစွာရွှေ့ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်အနေဖြင့် application များကို folder များနှင့် desktop များမှစီစဉ်ခြင်းအားပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ဒါကြောင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသင်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့စနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့လိုအပ်တဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေအားလုံးကိုရရှိမှာပါ။
iOS 11 ၏အသစ်အဆန်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့အစကတည်းက စ၍ အလွန်ကောင်းမွန်သော iCloud Keychain ဖြစ်သည် နှင့်ယခု applications များကဘယ်လိုသုံးနိုင်သည်။ ICloud Keychain သည်ဒေတာများကိုသိမ်းဆည်းပြီးသင်၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ထပ်တူပြုသည်။ သို့မှသာသင်လိုက်ဖက်သော application တစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါ၊ username နှင့် password သည်အလိုအလျောက်ဖြည့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမလှည့်စားတော့ပါ၊ အံ့ဖွယ်အမှုများမရှိပါ။ ၂ နှစ်ကြာပြီးနောက်ဗားရှင်းအသစ်များနှင့်ဘက်ထရီများသည်အဟောင်းများကိုထုတ်ကုန်များနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ နှစ်နှစ်အကြာတွင်၎င်းတို့သည်မဖြစ်ခဲ့ကြပါ၊ iOS ကိုလည်း update အသစ်များအတွက်ပြုပြင်ထားသည် iOS 11.1 ရောက်ရှိလာခြင်းသည်သင်တို့၏များစွာသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည် ငါတို့အများစုပြုခဲ့သောနောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသပ်မှုအရသိရသည်။ အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များနှင့်သင်၏ပြproblemsနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကအချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းမပြုမီသင်၏ကိရိယာကိုခြစ်ရာကနေပြန်ယူရန်အကြံပေးလိုလျှင်၊ သင်သည်မည်သည့်အရာမျှမဆုံးရှုံးပါ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » မင်းရဲ့ iPhone မှာပြနာတွေရှိလား။ Restore လုပ်နိုင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးတော့! သင် ota ပြီးနောက် ota ပြီးနောက်ဘာလို့မလုပ်သင့်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြသောသူသည်တစ်ကြိမ်တွင်။ အဓိကဗားရှင်းများနှင့်ဖုန်းအရက်မူးသည့်အချိန်တိုင်း (တစ်နှစ်လျှင်အများဆုံး ၂ ကြိမ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ios အသစ်ထွက်ပေါ်လာချိန်နှင့်တစ်ခြား ota များအများအပြားသုံးစွဲပြီးသည့်နောက်မတ်လတွင်) နှင့်ဘက်ထရီပြ2နာ0နှင့်အစဉ်အမြဲငါပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည်။
Raúl Aviles ဟုသူကပြောသည်
ငါလွဲချော်ခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအချက်က DFU မှ restore နှင့် restore ကြားကကွာခြားချက်ပဲ။ (ပြည်တွင်းမှာဘာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိလဲ။ )
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၌ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ သင် iTunes မိတ္တူတစ်စောင်ကိုအသစ်ပြောင်းရန် (သို့) ပြန်လည်မွမ်းမံရန်မသင့်ကြောင်းသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားသည်။ သို့သော် iCloud မိတ္တူကိုပြန်ထားပါ။ ဒါမကောင်းဘူးလား ... အကယ်၍ iphone ကိုပြန်လည်ထည့်ပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းကိုသင်၏ပန်းသီးအိုင်ဒီဖြင့်အိုင်ဖုန်းအသစ်အဖြစ်ပြင်ဆင်မည်လား၊ သို့မဟုတ် icloud backup ကိုသင်ပြန်ယူလျှင်၊ သင်ခန်းစာနှင့်မရှင်းပါ။ ခြားနားချက်ကားအဘယ်နည်း။ လေးစားပါတယ်
မင်္ဂလာပါ Alvaro ။ အဆိုပါဆောင်းပါးကအမှားအားလုံးကိုသယ်ဆောင်နေသောကြောင့်အရန်ကူးကိုမတင်သင့်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အိုင်ဖုန်းအသစ်လုပ်ပါ
အက်ပဲလ်က developer များအားသူတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကို iPhone X နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်
AirPlay ရှိပစ္စည်းများကို iOS 11 ဖြင့်ပြောင်းလဲနည်း